Fiidiyow: Mashiinka Raadinta ee Bilaabidda | Martech Zone
Fiidiyow: Mashiinka Raadinta ee Bilaabidda
Axad, Janaayo 13, 2013 Axad, Janaayo 13, 2013 Douglas Karr
Ugu dambeyntii waxaad ka bilaabatay bilowgii dhulka laakiin cidna kuma heli karto adiga natiijooyinka raadinta. Maaddaama aan la shaqeyno wax badan oo bilow ah, tani waa arrin aad u weyn clock saacaddu way sii socotaa oo waxaad u baahan tahay inaad hesho dakhli. Helitaanka raadinta ayaa aad uga dhaqaale badan shaqaalaynta koox dibedda ah. Si kastaba ha noqotee, Google uma fiicna bog cusub. Fiidiyowgan, Maile Ohye ka socda Google ayaa ka hadlaya waxa aad sameyn karto si aad u caawiso.
www - Go'aan ka gaadh inaad jeceshahay iyo in kale domain si aad uga bilowdo www iyo in kale. Hubso inaad u weeciso taraafikada kan aad dooratay adigoo 301 (waara) dib u jeedinaya.
Maamulayaasha shabakada - hubi inaad ku diiwaangeli boggaaga Qalabka Raadinta Google Search oo cadee haddii aad wax arrimo ah ku hayso bartaada iyo in kale.
qaylodhaan - Maile sidoo kale waxay kugula talinaysaa Saxeexitaanka ogeysiis Webmaster si laguu ogeysiiyo markasta oo ay jirto arin ku saabsan bartaada.
Domain - waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso baaritaanka asalka ah ee boggaaga si aad u hubiso in barta waligeed aysan dhibaato ku jirin ka hor intaadan dooran. Spam, furin, waxyaabo anshax xumo ah… mid ka mid ah arrimahaas ayaa dhaawici kara fursadahaaga darajada. Haddii dhibaatooyin jiraan, waxaad ku ogeysiin kartaa Google adoo adeegsanaya Webmasters in domainka uu hadda maamulo milkiile cusub.
Fetch - Maamulayaasha websaydhka, soo qaado boggagaaga si loo hubiyo in makiinadaha wax raadinta aysan la kulmi doonin dhibaatooyin gurguurta boggaaga.
Gudbi - haddii aysan dhibaato jirin, u gudbi bogga Google. Haddii aad ku dhisto bartaada a nidaamka maareynta maaddada weyn, CMS ayaa tan kuu sameyn doonta mar kasta oo aad daabacdo waxyaabo cusub ama cusbooneysiin ah.
Analytics - ku dar Analytics bartaada si aad uga bilaabi karto ururinta xog muhiim ah bartaada - hubinta horumarka iyo hagaajinta ku saleysan natiijooyinka. Haddii aad isticmaasho ama aadan isticmaalin Google Analytics, weli waan fulin lahaa maadaama ay heysato Webmaster, raadin lacag leh iyo xog bulsheed in Analytics madal kuma dari karo.
Design - soosaar istiraatiijiyad websaydh ah oo buuxisa baahiyaha booqdayaasha websaydhkaaga una kaxeeya ganacsigaaga. Wareeg fudud, hal bog halkii fikradba, iyo nashqadeynta xirfadeed ayaa kugu kalifin doonta gaadiid badan oo adiga kuu soo mara.
Conversion - sidee websaydhkaagu u beddelayaa rajada macaamiisha ama uu uga kaxayn doonaa iib dheeraad ah macaamiisha hadda? U hubso inaad leedahay beddelaad lagu qeexay bartaada - iyo cabbiraad ka wanaagsan, ku dar Raadinta beddelka Google Analytics.
Keywords - Mashiinnada raadinta ayaa si wanaagsan u tilmaami doona bartaada haddii ay fahmi karaan waxa bartaada iyo bogaggaagu ku saabsan yihiin. U hel xoogaa caawimaad xirfadeed helitaanka ereyada muhiimka ah ee warshadahaaga iyo uga faa'iideyso ereyada muhiimka ah bartaada dhexdeeda.
Speed - Hubso inaad goobta waa dhakhso. Ha dooran martigeliyaha ugu qiimaha jaban, waxay kaliya ku dhejinayaan bartaada shabakad wadaag ah, jilicsan oo dhaawici doonta labadaba mashiinka raadintaada iyo sabirka martidaada.
Pitfalls SEO suurto gal ah
SEO - shaqaaleynta la-taliye SEO ah oo hadh leh ayaa waxyeello ka badan tan ka wanaagsan u leh bartaada u geysan kara. Kireyso la taliye fahamsan kuna dhaqma Shuruudaha Adeegga ee Google.
Dib-u-xirid - Ka fogow qorshooyinka isku xirka ama iibsashada xiriiriyeyaasha si aad u kordhiso Pagerank. Tani badanaa waa xeelad loogu talagalay shirkadaha SEO inay ku dhisaan darajadaada. Waxaad siineysaa iyaga si ay ugu qaybiyaan waxyaabaha aan la shaacin ee shabakada si ay u geliyaan xiriiriyeyaal ka kooban waxyaabahaas.
halleeyo lillaahinimada - diirada saar barta fudud ee u soo bandhigeysa macluumaadka akhristaha iyo isticmaale mashiinka raadinta. Goobaha isku dhafan waxay u baahan karaan waqti dheeri ah, hoos u dhig goobta, oo qari waxyaabaha muhiimka ah ee matoorada raadinta u baahan yihiin si ay si fiican u fahmaan waxyaabahaaga.
Helitaanka la helay iyo darajaduba wali waxay ku tiirsan tahay caannimada bartaada. Google kaliya kuma aamini doonto oo waxay kugu dhufaneysaa # 1 meel loogu talagalay ereyga muhiimka ah ee muhiimka ah. Dhiirrigelinta bartaada ayaa lagama maarmaan u ah helitaanka aragti ku saabsan makiinadaha raadinta. Hubso inaad uqeybiso URL-kaaga war-saxaafadeed kasto ama maqaallo laga qoray bartaada. Ka saxeex bartaada Google+, Facebook, LinkedIn, Twitter oo aad bilawdid inaad lashaqeysid rajooyinkaaga, asxaabtaada, saamayntaada iyo shaqaalaha khadka tooska ah - kobcinta waxyaabaha aad qoreyso.
Tags: linkshorumarintadarajoayna search engineraadinta suuqgeynta bilowgaseo bilowgaGOORMUU